Muuse Suudi oo loo doortay Sanatar Aqalka sare | KEYDMEDIA ONLINE
Muuse Suudi oo loo doortay Sanatar Aqalka sare
Farmaajo, Fahad Yaasiin iyo Cumar Finish oo awooddooda isugu geeyay sidii ay Sanatar Muuse Suudi kaga guuleysan lahaayeen tartarnka kursiga Aqalka sare, isla-markaana ku saari laahyeen Cabdllaahi Sheekh Xasan oo Madaxtooyada ku daaban ayaa fashilmay dadaalkooda.
JOWHAR, Soomaaliya - Doorashada saddex kursi oo ka mid ah sideedda kursi, ee maamulka Hirshabeelle ku leeyahay Baarlamanka Aqalka sare ee JFS, oo hadda ka so socota Jowhar, ayaa waxaa kursiga koobaad ku tartamay Muuse Suudi Yalaxow, Axmed Xasan Caddow (Daaci), Cabdllaahi Sheekh Xasan iyo Dr. Xasan Caddaay Cali.
Wareegga 1-aad, waxaa ka soo gudbay Muuse Suudi Yalaxow oo helay 51 cod, Axmed Xasan Caddow (Daaci) oo helay 28 cod , iyo Cabdllaahi Sheekh Xasan oo la yimid 15 cod, halka uu tartanka ka haray Dr. Xasan Caddaay Cali oo kaliya helay labo cod.
Hayeeshee, inta aan la guda galin codeynta wareegga 2-aad, waxaa ku dhawaaqay inuu tanaasulay musharixii ay madaxtooyadu wadatay ee Cabdllaahi Sheekh Xasan, kaas oo muddo dheer difaac u ahaa kooxda Farmaajo.
Wareegga 3-aad oo ay ku baratameen, Suudi iyo Daaci, ayay ugu danbeyn guushu raacday Muuse Suudi oo helay 55 cod, halka Axmed Daacina uu la yimid 43 cod.
Doorashada ka dhacday Jowhar, waxa ay soo bandhigtay in afar sano kadib ay masraxyada doorashada ka soo gabagaboobeen Kooxda uu Fahad Yaasiin u taliyo ee Farmaajo hoggaamiyo, kuwaas oo ku guuldareystay in ay helaan wax ka badan 15 cod marka loo eego 98-ka Xildhibaan ee Hirshabeelle.
Sida ay Keydmedia Online hore u sheegtay, kursigaan waxaa si weyn ugu baratamay Madax-weynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed, kuwaas oo Suudi iyo Daaci ay ka kala tirsan yihiin Axsaabta ay kala hoggaamiyaan ee UPD iyo Himilo Qaran.
Muuse S. Yalaxow, wuxuu ka mid ahaa hoggaamiye kooxeedyadii Soomaaliya ee fadhigoodu ahaa Muqdisho, Dowladda (TFG) 2004, wuxuu ka mid ahaa 275 xubnood ee loo soo xulay Baarlamaankii Ku-meelgaarka ahaa kaas oo waqtigisu dhamaday 2009, sidoo kale, wuxuu soo noqday Wasiirka Ganacsiga Xukuumaddii Cali Maamed Geeddi.
Bishii Febraayo 2006 Yahalow wuxuu ku biiray Isbahaysiga Dib-u-soo-celinta Nabadda iyo La-dagaallanka Argagixisada (ARPCT) si loola dagaallamo Midowga Maxkamadaha Islaamka.
Bishii Janaayo 2007, Muuse Suudi Yalaxow, wuxuu noqoday qabqablihii ugu horreeyay ee Muqdisho ee hub ka dhigis lagu sameeyay, wuxuuna hubkiisii ku wareejiyay Dowaladdii Cabdullahi Yuusuf.
Afartii sano ee la soo dhaafay wuxuu ku fadhiyay kursiga uu hadda mar kale ku guuleystay, wuxuuna taageero weyn ka heystaa inta badan dadka ku abtirsada beesha Hawiye, gaar ahaan Abgaal.
Sanatar Muuse Suudi, waxaa lagu xasuustaa doorkii uu ka qaatay in dalku uusan dib ugu laaban gacan kali talis afartii sano ee na-weydaaratay iyo garab istaaggiisii Ciidamadii Badabaado Qaran ee ka hor yimid muddo kordhintii Farmaajo samaeystay bishii April.
Kursiga 2-aad ee caawa lagu baratamayo, waxaa ku tartamaya Senatar Prof. Maxamed Cismaan Dhegajuun iyo Nuur Maxamed Geeddi (Canjeex) halka kursiga 3-aad ay ku loollami doonaan Senatar Fartuun C/qaadir Faarax Karaama iyo Sacdiyo Yarow Aadan.